Ivenkile emfutshane ethengisa impahla eyomeleleyo ekhawulezileyo eyomeleleyo kunye neFonti | I-Stamgon
Iibhodi ezimfutshane ezomileyo zokugcina ibhodi emfutshane eziphathwayo
Inani leModeli: SSDKR190807-1
Inkcazelo: mens iilwandle iifutshane
Iphakheji: 1pc / Ingxowa yokuchasana
Indawo yeMvelaphi: Fujian, China
☆ Isinqe esidityanisiweyo kunye nentambo ye-elastic kunye ne-cored cored kunye ne-eyelet zensimbi.
☆ Umgangatho oqaqambileyo: Isixhobo somgangatho siyi-100% ye-polyester peach ulusu velvet, sikhululekile, kwaye sinokuphefumla, qinisekisa ukuba uyakuyonwabela ngokupheleleyo ukuyinxiba. Qaphela: ubungakanani obuqhelekileyo: S, M, L, XL, XXL.
☆ Iipokotho ezimbini zangaphambili kunye neploti enkulu esecaleni, efanelekileyo ukubeka izinto ezingakumbi ngaphakathi.
☆ Le bhulukhwe yolwandle ikubeka uvakalelo olukhethekileyo malunga nentuthuzelo kunye novuyo kwiiholide, i-honeymoon, uhambo lwaselwandle, ipati yephathi kunye nemisebenzi eyahlukeneyo yamanzi.
Igama lemveliso: Iibhodi ezomeleleyo ezikhawulezayo zokumisa iibhodi ezimfutshane zonxweme
Isixhobo: I-100% i-polyester
Amashumi-amafutshane elunxwemeni ngeNkonzo ye-OEMM yeOEM
Ubungakanani: S / M / L / XL / XXL
Isici: Imfashini, iyaphula, abanye.
Umbala: Luhlaza, grey, luhlaza
Lable kunye ne-logo Logo Esemthethweni yamkelekile
Izinto zesitokhwe: iintsuku ezili-15; I-OEM / ODM: Iintsuku ezingama-30-50 emva kokuba iisampulu zivunyiwe.
I-Stamgon yinkampani yemveliso ebonakalayo ekhethekileyo ekuboneleleni ngamanenekazi ngeendlela ezahlukeneyo zokunxiba, ezinje nge-bikinis e-sexy, i-swervar, i-tankinis, i-50s ye-retro monokinis, kunye neesuti zokuhlamba ubukhulu, njalo njalo. Isuti yethu yonke yenzelwe ngokukodwa ukuba ikwenze uzithembe kwaye ube nomtsalane ngakumbi. Iqela le-Stamgon lizibophelele ekuziseni abathengi bethu amava amahle oku-odola ngokunikezela ngemigangatho ephezulu yenkonzo esekwe kumgangatho ofanelekileyo wazo zonke iimveliso zethu.
1.Sinokusebenzisa ilogo yesiko kuzo zonke iimveliso zethu, ukuba unolu bango, nceda uthumele i-imeyile kuthi ngomfanekiso wakho we-logo kunye nenani leodolo, siya kujonga indleko zokuprinta kwaye senze ikowuti kuwe kusuku olunye lokusebenza.
2.Sinokuphinda siphuhlise iisuti ezintsha ngokwendlela yakho yobugcisa, isampulu, okanye iifoto ezicocekileyo.
3.Ukuvuma ngokwezifiso ubungakanani kunye nemibala.
Isixhobo se-4Fet sinokutshintshwa kwiimfuno zakho.
5.Sinomzi-mveliso wethu odibeneyo, onokunikezela ngexesha elifanelekileyo.
6.Ienkonzo ezintle zokulandela umkhondo kunye nokubuya komgaqo-nkqubo emva kokuba kuziswe iimpahla.
Edlulileyo: Iibhodi ezomeleleyo ezikhawulezayo zokumisa iibhodi ezimfutshane zonxweme
Okulandelayo: Ukutshisa ezomileyo isiko mens ibhodi yebhodi emfutshane, iindlela ezi-4 zolula i-camo board, ukunxiba kwe-mens
Iibhanti zeBhodi elwandle
Iibhanti zabafana bebhishi
Iibhanti zasebhishi zeSiko
Iibhanti zaseMens Beach Shorts
Umgangatho Okokuqala, ukuQinisekisa ukuKhuseleko
Amashiti ebhodi ebhodi enomileyo akhawulezayo, indlela ezi-4 ...
Iibhodi ezimfutshane ezomileyo zokugcina ibhodi ...
Iibhodi ezomeleleyo ezikhawulezayo zokumelana ngokukhawuleza ezomeleleyo ...